Raha tsy mandeha amin'ny Android Auto ny sasany amin'ireo rindranasa Android anao dia manana ny fomba tsara indrindra hampiasana ny fampiharana rehetra izahay. AA Phenotype Patcher dia rindranasa Android, izay manome ny mpampiasa hampiasa ny rindranasa rehetra amin'ny Android auto. Ampiasao ao anaty fiara ny fampiharana tsy voasakana na tsy misy.
Raha mampiasa Auto amin'ny dianao ianao dia ho fantatrao ny momba ireo fiasa sy serivisy mahatalanjona. Azonao atao ny mampiasa ny fitaratry ny fiara amin'ny alàlan'ny fitaratry ny fiara anao. Misy endri-javatra mahatalanjona kokoa hita ao amin'ity fampiharana ity. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary hizaha izany rehetra izany.
Inona no atao hoe AA Phenotype Patcher Apk?
AA Phenotype Patcher No Root dia rindranasa Android, izay manome ny mpampiasa Android auto hiditra amin'ireo rindranasa voasakana rehetra. Afaka mampiasa mora foana ireo rindranasa voasakana rehetra amin'ny fiara misy ny fiara ianao miaraka amin'ity patcher mahavariana ity ary mankafy ny dianao.
Raha mpampiasa fiara Android ianao dia ho fantatrao daholo izany. Fa raha tsy fantatrao ny momba izany dia eto ho anao izahay. Izy io dia rindranasa nomerika izay novolavolain'i Google ho an'ireo mpampiasa hampiasa ny rindranasa finday rehetra misy ny finday avo lenta amin'ny fitaratra fitaratra.
Tany am-piandohana, ny rindranasa rehetra dia niasa ho an'ireo mpampiasa, izay midika fa afaka mampiasa mora foana ny fampiharana rehetra misy eo amin'ny fitaratry ny fiaranao ianao. Ny fampiasa amin'ny fitaratra dia manome ny mpampiasa hiasa mora foana amin'ny endri-javatra amin'ny alàlan'ny fikasihana, ny karazana na ny baikon'ny feo aza.
Noho izany, tsy mila manelingelina ny tenanao amin'ny làlana ianao ary mbola mampiasa ireo endri-javatra rehetra misy. Manaova antso na mandray antso, miditra amin'ny YouTube na miserasera amin'ny Internet. Azonao atao izany rehetra izany sy ny maro hafa miaraka amin'ity fampiharana mahavariana ity.
Ny fanavaozana farany, izay namboarina tao amin'ny fiara mihazona fiara ary tsy mandeha intsony ny sasany amin'ireo rindranasa. Ho hita amin'ny findainao ireo rindranasa ireo, saingy tsy hiseho amin'ny fitaratra Android Auto izy ireo.
Noho izany, misy patcher vitsivitsy novolavolaina, izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ireo rindranasa tsy misy rehetra misy. Saingy ireo fitaovana ireo dia mitaky fidirana amin'ny faka, izay midika fa tsy maintsy manongotra ny fitaovanao ianao. Izy io dia iray amin'ireo zavatra riskiest indrindra mifandraika amin'ny fitaovanao.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity patcher mahagaga ity ho anao, izay hiasa amin'ny fitaovana No Root. Azonao atao ny mametraka mora foana ity fitaovana ity amin'ny fitaovanao mifandray amin'ny fitaratra ary mankafy ny serivisy rehetra. Azonao atao ny mampiasa ny fampiharana tsy misy rehetra amin'ity patcher ity nefa tsy manao vivery ny fiainana manokana.
Misy endri-javatra mahavariana maro kokoa ao amin'ny fampiharana, izay azonao zahana ao. Noho izany, ampidino fotsiny ity patcher ity ary tadiavo izany rehetra izany. Raha manana olana amin'ny fisintomana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
anarana AA Phenotype Patcher
Anaran'ny fonosana pl.eselter.aaphenotypepatcher
Raha te-hisintona ny rakitra Apk ianao dia eo amin'ny toerana mety. Azonao atao ny misintona ny kinova farany sy miasa farany an'ity rindranasa ity. Tadiavo ny bokotra misintona amin'ity pejy ity ary manaova paompy ao aminy, hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana, dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany dia mandehana any amin'ny Settings ary sokafy ny tontonana Security, avy eo ny mari-pamantarana amin'ny 'Source tsy fantatra. Aorian'ity fizotrany ity dia afaka mametraka azy eo amin'ny fitaovanao ianao.
Midira amin'ny fampiharana rehetra amin'ny Android Auto
Midira amin'ny fampiharana tsy misy
Tsy ilaina ny faka
Milamina ary azo antoka
Mahazoa fidirana azo antoka sy ara-pahasalamana amin'ireo rindranasa voasakana rehetra amin'ny fiara misy ny fiara miaraka amin'ny AA Phenotype Patcher Android amin'ny finday avo lenta ary mankafy Raha manana olana amin'ny fidirana amin'ireo endri-javatra misy ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Tools, Apps Tags AA Phenotype Patcher, AA Phenotype Patcher Apk, AA Phenotype Patcher Download Post Fikarohana